Halkii la filayay in beesha caalamku cadaadis saarto dhinacyada is diidan ee soomaalida, waxaa hadda soo baxaya in Madaxwayne Farmaajo uu iyagii cadaadis saarayo - Allbanaadir Media
Home Warka Maanta Halkii la filayay in beesha caalamku cadaadis saarto dhinacyada is diidan ee...
Halkii la filayay in beesha caalamku cadaadis saarto dhinacyada is diidan ee soomaalida, waxaa hadda soo baxaya in Madaxwayne Farmaajo uu iyagii cadaadis saarayo
Halkii la filayay in beesha caalamku cadaadis saarto dhinacyada is diidan ee soomaalida, waxaa hadda soo baxaya in Madaxwayne Farmaajo uu iyagii cadaadis saarayo, isaga oo ku oronaya arrimaha soomaaliya ka dhex baxa.
Shirkii la filayay in ay isugu yimaadaan beesha caalamka iyo shanta maamul goboleed ayaa cadaadis uga yimid beesha caalamka dhanka Villa Soomaaliya waxaa ay khasabtay in iyaguna dibad joog ka noqdaan shirka.” Waa Beesha caalamkee”
Waxaa la filayaa in shanta maamul goboleed oo kaliya ay shir ku yeeshaan aaga xalane, islamarkaana ay isla meel dhigaan qodobada muranka keenay.
Rajo badan lagama qabo in ay kulankooda wax ka soo baxaan, waayo Madaxwayne Famaajo oo ah ninka talada loola laaban doono ayay ku xirnaan doontaa natiijada qodobada ay ku wada hadlaan.
Bootada beesha caalmka oo ay Soomaalidu fahmeen, Waxaa taas ka sii daran hadalada jahawareerinta ku dhisan ee ay qaar ka mid ah danjirayaasha beesha caalamku ku soo daabacaan barahooda social media-ha.
Inta badan danjire Yamamoto waxaa uu isticmaalaa hadalo ku dhisan Cali garleh Caydiidna gar leh oo ah maah maah horay u baxday taas oo aakhirkii sababtay dagaalkii sokeeye ee Muqdisho ka dhacay.Siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada qaar ayaa aad ula yaabay hadal uu maanta barta safaaradda maraykanka ee Muqdisho ku soo daabacay, oo ahay:Madaxwayne Farmaajo waa in uu xaqiijiyaa in si buuxda shirka looga soo wada qaybgalo, maamul goboleedyada oo uu madaxdooda magacaabayna waxaa uu ku yiri” Waa in aad bilaa shuruud ka qaybgashaan shirka, waa hadalo macno badan aan xambaarsanayn balse sii murjinaya xaaladda cakiran ee u dhaxaysa hogaamiyayaasha Soomaalida.
Labada madaxwayne ee Siciid Dani iyo Axmed Madoobe waxaa ay ku sugan yihiin goob aad loo ilaaliyo oo ku taala Xalane, Waxaa halkaas looga dhawaaqay madasha Badbaado Qaran, Waxaa kale oo ka bilaawday Shir la mid ah kan ka socda Teedhada Afisyooni.
Madaxwayne Farmaajo waxaa uu beeniyay hadal ka soo baxay Xaafiiska Madeira ” Wakiilka midawga Afrika” kaas oo ahaa in teendhada Shirka ay amaankeeda Sugayaan Ciidamada Amisom, sidoo kale waxaa hadalkaas oo kale yiri James Swan oo waraysi siiyay V O A da.Madaxwayne M C Farmaajo waxaa uu halkaas la tagay dabaabaad iyo ciidamada koofiyo Casta , iyadoo goobta ay isaga baxeen ciidamada Amisom, mana jiro wax qoraal ah oo ka so baxay Amisom iyo UN ka, sababta isbadalka keentay.
Ma jiro qorshayaal cad oo ay beesha caalamku si rasmi ah Dawladda ugu taageerayaan, iyaga oo si buuxda ula hadlaya siyaasiyiinta ka soo horjeeda, waxaa kale oo aan jirin qorshayaal ay dawladda ku tusayaan khaladaadkeeda, taas macnaheedu waxaa uu yahay in ay Soomaalida qoorta isu galiyaan.
Sidee ku dhici kartaa in labada goobood ee Xalane iyo Afisyooni oo ay ciidamada Amisom ilaaliyaan ay ka dhacaan shirar iska soo horjeeda?, maxaa loo la ‘yahay mawqif midaysan oo ay ka qaataan xaaladda cakiran ee xilligaan.
Warqadda ka soo baxday Midawga Yurub ayaa xaqiiqada ugu dhaw, waa hadii ay ficil u badalayaan, Marka ay u cadaato in baaqooda dhagaha laga furaystay.
Maxay adiga kula tahay?.